Posted by ပါရမီဖြည့်ဖက်လေး at 8:33 PM
ခရမ်းချဉ်သီး ငါးပိချက်လေး စားချင်လိုက်တာ..
Same here Sunny, wanna eat that too!
ခရမ်းချဉ်သီးချက်မှာ ငါးပိလေးပါ ထည့်ထားတော့ အကြိုက်ပဲ။ သရေကျသွားတယ်။
My favorite dish. Yummy...my mouth is watering.
ခုတလော ကော်မန့်ပေးရခက်နေတာ ကော်နက်ရှင်ကြောင့်လေ
အစောက လာပေးတာမရလို့ ခုပြန်လာတာ
ခရမ်းချဉ်သီး ငပိချက်နဲ့ ထမင်းလေးနဲ့ နယ်စားလိုက်ရရင် ဆွေမျိုးမေ့သွားမယ် ထင်တယ်နော်။။
ရှိသေးရင် နည်းနည်းကျွေးပါး)
ဆီများတယ်.. အချို မုန့် မကြိုက်ပါ.. မစားသင့်ဟု ထင်ပါတယ်.. ဟင်းတွေမှာ နဂိုသဘာဝအရသာရှိပီးသားမို့ အချို မုန့်က ရောဂါဖြစ်စေပါတယ်..